Galaxy A82 5G ga-abịa na Qualcomm's Snapdragon 855 | Gam akporosis
Galaxy A82 5G bụ otu n'ime smartphones na-esote site na Samsung. A nụwo ọtụtụ ihe banyere ngwaọrụ a na, n'ụkpụrụ, a kwuru na ọ ga-abụ nke dị n'etiti, mana ọ dị ka ọ ga-abụ nke dị elu, mana ọ bụghị nke dị ugbu a.
Dabere na Geekbench, akara aka nwalere ya n'oge na-adịbeghị anya na nke gosipụtara ndepụta na ekwentị, A ga-ebido Galaxy A82 5G na ahịa na akụkọ ifo na ama ama ama Qualcomm Snapdragon 855Ihe na-achọsi ike ịmata ihe, ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe a na-ahụkarị maka ndị na-emepụta ekwentị mkpanaka iji chipsets ochie ochie na ụdị ọhụụ ha, ọ bụ ezie na nke a nwere ike inwe mgbagha n'azụ ya.
Galaxy A82 5G ga - abata na Snapdragon 855 n'okpuru nkpuchi
Ọtụtụ Snapdragon 855 processor chipsets kwuru na-ekpe ekpe ejibeghi na Samsung na bụ ya mere na ngwaahịa. Lọ ọrụ ahụ, iji kpochapụ ma ọ bụ kpochapụ ihe ndị a, ga-etinye ha n'ọrụ na ekwentị ọhụrụ ekwuru.
Dabere na ihe Geekbench kpughere banyere ngwaọrụ a n'oge na-adịbeghị anya, Ọ ga - abụ nke nwere ikike RAM 6 GB wee rute na sistemụ arụmọrụ nke gam akporo 11.
Ihe ọzọ nke benchmark gosipụtara na ndepụta ahụ bụ akara nke akara ngosi ahụ na-enweta, nke bụ 757 na ngalaba otu isi na isi 2.678 na ngalaba ọtụtụ isi.
Banyere nkọwa nke Galaxy A82 5G, amabeghị ọtụtụ ihe, mana ekwuru na a ga-ebido ya na ihuenyo 6.7 inch diagonal Super AMOLED na FullHD + mkpebi nke 2.400 x 1.080 pikselụ, ebe nchekwa dị n'ime nke 128 GB. ikike na batrị 4.500 mAh. A ga-enwe ngwugwu igwefoto quad nwere ihe mmetụta 64 MP.
N’ikpeazụ, amabeghị mgbe a ga-ebupụta mkpanaka ahụ, mana eziokwu ahụ bụ na ozi a apụtawo, na-eme ka anyị ghọta nke ahụ igba egbe ziri ezi na akuku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » 855 Snapdragon 2019 Ga-agbake na Galaxy A82 5G - Ekwentị Na-egosi Na Geekbench
Igwe kacha mma na-arụ ọrụ nke Machị 2021